La kulan Halyeyyada Dalxiiska ee Suuqa Socdaalka Adduunka ee London maanta
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Ururada » La kulan Halyeyyada Dalxiiska ee Suuqa Socdaalka Adduunka ee London maanta
Wararka Ururada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Wararka UK • Wtn
eTurboNews daabace Juergen Steinmetz, oo sidoo kale ah Guddoomiyaha Shabakadda Dalxiiska Adduunka, ahna Xubin Sare oo ka tirsan Guddiga Dalxiiska Afrika ayaa gaaray London Axaddii, isagoo diyaar u ah inuu goobjoog ka ahaado kana qayb qaato dib u bilaabista bandhigga ganacsiga ee warshadaha safarka ee labaad ee ugu weyn - Suuqa Socdaalka Adduunka ee London Noofambar 1-3.
Maanta, Suuqa Socdaalka Adduunka ee London wuxuu albaabada u furi doonaa 10.00 subaxnimo ee Xarunta Bandhigga Excel ee London.
Hogaamiyayaasha safarka iyo dalxiiska ee ka kala yimid daafaha aduunka ayaa mar kale ku sugan London si ay ula kulmaan, u salaamaan, ugana hadlaan.
Shabakadda Dalxiiska Adduunka ayaa soo dhaweyn doonta geesiyaasha Dalxiiska maanta, Isniinta 4.00 galabnimo Xarunta Dalxiiska Kenya ee Stand AF 150
Ma aha oo kaliya waa Suuqa Safarka Adduunka fursad lagu ikhtiraaco, soo saaro oo lagu iibiyo badeecooyin safar oo cusub da'da COVID-19, laakiin sidoo kale waxay fursad u tahay kuwa dhaqaaqa oo ruxay warshadaha inay mar kale midoobaan shaqsi ahaan. Midawgani waa inuu lahaadaa cod xoog leh si uu dib ugu soo laabto wadada.
"Jahwareerka wuxuu u baahan yahay inuu mar kale ka baxo safarka," ayuu yiri Juergen Steinmetz. "Shabakadda Dalxiiska Adduunka waxay diyaar u tahay inay qayb ka noqoto doodda ballaaran. Weli ma jiro ganacsi sidii caadiga ahayd, wada shaqaynta dhammaan dhinacyada ay khusaysona waa furaha guusha.”
Geesiyaasha Dalxiiska aqoonsan yahay Shabakada Dalxiiska Adduunka waxaa lagu casuumay Kenya Stand (AF150) maanta 4.00 galabnimo. (Noofambar 1) Ururku wuxuu aqoonsan doonaa laba geesiyaal oo cusub oo ka socda Israa'iil iyo Barbados- waxaana la filayaa in soo-booqdayaal badan oo la yaab leh ay qayb ka noqdaan kulanka ugu horreeya ee NON ZOOM ee xubnaha WTN iyo dhagaystayaasha WTM.
Shabakadda Dalxiiska Adduunka waxaa loo sameeyay sida Dib u Dhiska Safarka dood uu bilaabay daabacaadan, PATA, Guddiga Dalxiiska Afrika, iyo Guddiga Dalxiiska Nepal bishii Maarj 2020 oo dhinac socday ITB Berlin oo la joojiyay.
In ka badan 200+ shirar zoom ah ayaa sameeyay iskaashi dhanka socdaalka iyo dalxiiska adduunka ee ka socda 128 wadan. Hadafka WTN waa in sidoo kale lagu daro cod ciyaartooyda yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee safarka caalamiga ah iyo warshadaha dalxiiska.
Halyeygii ugu horeeyey ee dalxiiska, Hon. Najib Balala, Xoghayaha Dalxiiska ee Kenya ayaa martigelin doona. Sidoo kale waxaa la filayaa in uu ka soo qeyb galo Mudane. Edmund Bartlett oo ka socda Jamaica, iyo Dr. Taleb Rifai, Xoghayihii hore ee Qaramada Midoobay UNWTO - dhamaantood waxay ka mid yihiin geesiyaashii ugu horreeyay ee dalxiiska ee uu aqoonsaday ururkan.
Barbados waxay soo bandhigi doontaa geesigeeda cusub ee dalxiiska waxaana la filayaa inay ka soo qaybgalaan wasiirka, madaxa guddiga dalxiiska, iyo shaqaalaha TV-ga Qaranka.
Christian Rosario, eTurboNews Sawir qaade ku guulaysta abaalmarinta asalka ah ayaa qaadi doona sawirro yaab leh si uu u wadaago.
Arbacada 11.30 subaxnimo, Dr. Peter Tarlow, madaxweynaha WTN ayaa ka hadli doona goobta Kalfadhiga Amniga internetka Ku Socota Horusocodka Suuqa Safarka Adduunka.
In kasta oo ay la kulmeen qaar ka mid ah jebinta xogta ugu weyn sannadihii la soo dhaafay, warshadaha safarka ayaa weli ka buuxa godad ammaanka. Shirkadaha waaweyn ee diyaaradaha iyo silsiladaha hoteellada ayaa la halgamaya sidii ay u sugi lahaayeen aaladooda internetka xitaa ka dib markii la jebiyey xogtii hore iyo weeraradii internetka oo soo bandhigay macluumaadka malaayiin macaamiisha ah oo ay ganaaxyo ka soo saareen maamulayaasha sirta ah. Hadda in ka badan sidii hore, waxaa muhiim u ah warshadaha socdaalku inay la socdaan waqtiyada isbeddelaya iyo tallaabooyinka loo baahan yahay si looga hortago khatarahaas. Inta lagu jiro kalfadhigan, guddiga khubarada ayaa wadaagi doona aragtida tillaabooyinka ay tahay in warshaduhu qaado si ay isaga difaacaan khataraha iyo khatarta internetka si ay u ilaaliyaan xogta macaamiishooda.
Suuqa Socdaalka Adduunka wuxuu martigelin doonaa Shir-madaxeedka Wasiirrada ee UNWTO had iyo jeer WTTC. Sacuudiga ayaa sanadkan la filayaa inuu yeesho door aad u muuqda.
Igu kulan WTM
Juergen Steinmetz ayaa diyaar u ah inuu la kulmo eTurboNews akhristayaasha shakhsi ahaan suuqa socdaalka adduunka. Fadlan kala xidhiidh WhatsApp: +1-808-953-4705 ama iimayl [emailka waa la ilaaliyay]